Guddoonka Baarlamaanka Golaha Shacabka oo ku baaqay in la joojiyo Colaadda Mudug – Radio Muqdisho
Guddoonka Baarlamaanka Golaha Shacabka oo ku baaqay in la joojiyo Colaadda Mudug
Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday Towfiiq iyo Afbarwaaqo ee Gobolka Mudug.
Mahad Cabdalla, ayaa faray Guddiga nabadeynta iyo Ciidamada isku dhafka ah in ay si deg-deg ah u kala dhex galaan Dadka Walaalaha ah ee ay colaaddu dhex martay.
“Waa arrin aan la aqbali karin Guddiga nabadeynta iyo ciidanka xasilinta ee isku dhafka ah waa inay si degdeg ah u kala dhex galaan dadka walaalaha ah ee colaadu dhex martay”. ayuu yiri Guddoomiyuhu.
Colaadda Gobolka Mudug oo inta badan ka dhalata aano qabiil iyo dhul ayaa sanadihii u dambeeyay ahayd mid laga nastay, taas oo ay qaboojinteedu door Lixaad leh ka qaateen Dhallinyarada oo kaashanaya Dowladda Federaalka, maamullada labada dhinac iyo ururrada Bulshada.
QM oo soo saartay waxyeellada ay geysteen Roobabkii k da’ay Bariga Afrika
Bulshada Gardafuu oo si isku tashi ah u furaya Waddada Dhabaaqo “SAWIRRO”